शारिरिक सम्पर्कको सुरुवातपछि युवतीमा हुन्छ यस्ता परिवर्तन | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २७ कार्तिक २०७६, बुधबार १४:५८ लेखक नेपाली जनता
शारिरिक सम्पर्क कुनै पनि सम्बन्धको लागि ठूलो परिवर्तन लिएर आउँछ । इमोशन्सको साथै कपलकाबीच बन्डिंगलाई पनि विभिन्न तरिकाले प्रभावित पार्छ । तर, कुरा यतिमा मात्र सिमित हुँदैन । शारिरिक सम्पर्क सुरु गरिसकेपछि पुरुषमा भन्दा महिलामा यसको विभिन्न परिवर्तन हुन जान्छ ।
शारिरिक सम्पर्कपछि पुरुषको तुलनामा महिलाको शरीरमा मस्तिष्क बढि अक्सीटसिन र डोपामाइन हर्मोन फाल्ने काम गर्छ । जसको प्रभाव उनको इमोशन्सको साथै व्यवहारमा पनि पर्न जान्छ । यो असर केहि समयका लागि मात्रै होइन विस्तारै सम्पूर्ण व्यक्तित्वमा नै पर्न जान्छ ।
शारिरिक सम्बन्धको सुरुवातले महिलालाई आफ्नो शरीरलाई लिएर कन्फिडेन्सलाई पनि बढाउने काम गर्छ । तर, जब पार्टनरले तपाईंको शरीरको हर अंगलाई माया गर्छ भने कन्फिडेन्स बढ्नु स्वभाविक पनि हो ।
शारिरिक सम्पर्कको क्रममा र त्यसपछि स्तन बढेको अनुभव हुन्छ । यस्नो यस कारण हुन्छ, किनकी शारिरिक सम्बन्धको क्रममा नर्भस सिस्टमले पनि प्रतिक्रिया दिन्छ र स्तन ठूलो हुन जान्छ । तर, यसको मतलव यो होइन की यो फर्मनेस सँधै रहिरहन्छ । शरीर रिल्याक्स हुनासाथ यो सामान्य बनेर जान्छ ।
शारिरिक सम्बन्धको सुरुवातपछि महिलाको स्तनको आकार पनि बढ्न थाल्छ । हर्मोनमा हुने परिवर्तनका कारण यस्तो हुने गर्छ । उसो यो सबैको साथ एक समान होस् भन्ने जरुरी हुँदैन ।
शारिरिक सम्पर्कको सुरुवातपछि महिलाले आफ्नो भजाइनामा परिवर्तन महसुस गर्छिन् । इन्टरकोर्सको क्रममा बडी रियाक्शनको कारणले हुने गर्छ । त्यसै कारणले समय सँग सँगै भजाइनाको आकार पनि ठूलो हुँदैछ ।
शारिरिक सम्पर्क सुरु भएपछि महिलाको पाठेघर र क्लिटरिसको रियाक्शनमा पनि परिवर्तन आउँछ । इन्टरकोर्सबाट उत्तेजित हुनाले यी अंग सुन्निने हुन्छ । जसलाई मस्तिष्कले याद राख्छ र एक्साइटमेन्टको स्थितिमा प्रत्येक पटक यसरी नै प्रतिक्रिया दिन्छ ।
कपलको बीच शारिरिक सम्पर्कको सुरुवात हुनाले उनलाई एक नयाँ मोडमा लिएर जान्छ । यसको असर विशेष गरि महिलामा पर्न जान्छ । किनकी महिलाका लागि शारिरिक सम्पर्क एक अलग नै महत्वको हुन्छ । जस कारण लाईफ महिलामा सुरु भएपछि उनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई लिएर निकै नै भावनात्मक रुपले सेन्सेटिभ हुने गर्छिन् ।एजेन्सी
प्रहरी र विप्लव कार्यकर्ताबीच भिडन्त, प्रहरीको गोली लागी विप्लवका अछाम इञ्चार्ज घाइते
अछाम । प्रहरी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाका कार्यकर्ताबीच अछाममा दोहोरो भिडन्त भएको छ । जिल्लाको रामारोशन…
पार्टी सुधारको अभियानमा कहाँ–कहाँ पुग्दैछन् पौडेल ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टी सुधारको अभियानमा लागेका छन् । उनले कर्णाली प्रदेशबाट आफूले कांग्रेस…
१ पटक गर्दा एक हजार एक रातको पैतिस सय….
रुपा शर्मा नेहा । कलंकीस्थित चेन्ज नेपाल नामक संस्थाको कार्यालयमा काम विषेशले पुगेकी थिएँ । व्यवसायिक यौन दुव्र्यवहार नियन्त्रणको लागि…
दलआबद्ध ट्रेड युनियन खारेज
काठमाडौं । उच्चस्तरीय संघीय प्रशासनिक पुनःर्संरचना सहजीकरण समितिले आधिकारीक एउटावाहेक राजनीतिक दलआबद्ध सबै कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्न सरकारसँग…
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बोलाउन देउवा राजी !
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता कार्यकर्ताको आक्रोश कम…
वैशाखदेखि सबैतिर लोडसेडिङ हट्ने !
काठमाडौं । विधुत प्राधिकरणले वैशाखपछि सबैखाले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : आजराति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु7views
बाह्रबिसे बजारमा निषेधाज्ञा जारी6views